WAA MAXAY MALABKII, SIDA LOO CUNO MACAANKA SI SAX AH - BEEKEEPING
Malabaha Honeycomb waa badeeco dabiici ah, taas oo ay sabab u tahay carafka ubaxa iyo dhadhanka aan caadiga ahayn, waxaa si fudud loo buuxiyaa niyadda xagaaga. Laga soo bilaabo waqtigeedii, malabyo shinni ah ayaa loo tixgeliyaa badeecad aad u qiimo badan oo wax soo saarka shinni ah, laakiin ma aha in qof kastaa ogyahay waxa faa'iido badan u leh malabku? Aan isku dayno inaan ogaano.
Waa maxay malabku, sida malabku u dhisto
Honey in aan weli laga soo saarin unugyada wax lagu yiraahdo waxaa lagu magacaabaa "malab in malab ah" ama "shanlada malab." Inta badan, malab this waa dareere ah, laakiin mararka qaar la'aanta qoyaan ku filan, waxay kicin karaa yar. Waa maxay dhadhanka dhadhanka iyo urta waxay kuxirantahay dhirta ay ka soo baxaan shinnida iyo nectar.
Markaad dhiseyso malab, waa muhiim in la fiiriyo tayadooda. Haddii unugyada si khaldan loo dhiso, iyada oo tiro badan oo ka mid ah unugyada ku-meel-gaadhka ah iyo darawallada, waxay noqon doonaan kuwo aan ku haboonayn inay dhigaan shinniisha boqoradda.
Waa muhiim! Si aad u hesho malab tayo sare leh, waxaad u baahan tahay inaad kordho shaxanka leh xaashida malab macmal ah.
In shanlada, laga bilaabo ukumaha, shakhsiyaadka cusub u muuqdaan, nectar waxay u beddeshaa malab, iyo shinni ee meelaha sidaas oo kale nasasho iyo keydin kaydka hilibka lo'da iyo malab. Iyadoo ku xiran ujeedada iyo qalabka, waxaa jira lix nooc oo unugyo ah:
Bee Unugyada beecmushku waxay leeyihiin qaabka laba geesoodka ah. Waxay u adeegaan taranka taranka shaqada iyo kaydinta shinni shinni iyo malab;
Ma taqaanaa? Perga - manka ubaxa, kaas oo bees ku riday unugyada, tamped iyo buuxiyey malab.
Taraashadu waxay ku kala duwan yihiin shinnida oo keliya. Waxa kale oo loo isticmaalaa in lagu kaydiyo malab, laakiin beesku ma duugin perga iyaga (sababtoo ah tan lama caddayn);
Ku-meel-gaar ah. Noocyada noocan oo kale ah shinni ayaa loo dhisay si ay uga soo guuraan malabkana u socdo drone. Farqiga ugu weyni waa maqnaanshaha calaamadaha gaarka ah. Unugyadaasi waxay buuxiyaan booska u dhexeeya unugyada. Mastar socodka ku-meel-gaarka ah wuu ka yar yahay drone, laakiin ka weyn shinni. In iyaga, malab dukaanka ku hay, laakiin ma korin kalluunka;
Daran. Sida unugyada ku-meel-gaadhka ah, unugyada xad-dhaaf ah waxay leeyihiin qaab aan caadi ahayn. Waxaa loo adeegsadaa si gaar ah loogu talagalay mesh mesh si ay u noqdaan kuwo jajaban;
Honey. Iyadoo naqshadeynta, waxay la mid yihiin macaanka, laakiin badan oo dheer. Waxay sidoo kale ka qoto dheer yihiin unugyada kale, iyo mahadsanaanta qaab dhismeedka sare u xiisa badan, malab ma ka soo baxaan;
Uterine. Unugyadaasi waa kuwa ugu weyn. Sida ka muuqata magaca, waxaa loo isticmaalaa for bees boqoradda sii kordhaya. Unugyada ilmagaleenka marnaba ha kaydin wax kayd ah.
Halabuurka iyo sifooyinka wanaagsan ee malab
Si ka duwan noocyada kale ee malab, malabku wuxuu ku kordhay manka, miro iyo propolis. Waxa kale oo ku jira tiro ka mid ah amino acids, micro iyo macro, antibiyootig dabiici ah iyo enzymes kala duwan. Halabuurka malabku wuxuu ku xidhan yahay noocyada dhirta kaas oo ka soo baxa manka. Celceliska macaamiisha:
Ma taqaanaa? Dufanka Honey waa gabi ahaanba maqan yahay.
Macaamilaha bisil, si kaamil ah, faa'iidooyinka ay u keenaan jirka bini'aadamka, muddo dheer ayaa lagu caddeeyey ficil ahaan, iyo dhibaatadu waxay muujin kartaa oo keliya qaab-celinta xasaasiyadeed. Thanks to wax mugdi ku jira macaanka, jidhka waa la nadiifiyaa waxyaabo waxyeello leh, sunta iyo jeexjeexyada laga saaro. Honeycombs malab leh saameyn ku leh nidaamka neefsiga iyo baabi'iyaan dhibaatooyinka dhakhtarka ilkaha. Waad ku mahadsan tahay malab, malabkeenku waxay leeyihiin bakteeriyada, antifungal, bogsoon bogsashada iyo saameynta immunogenic.
Propolis waxay joojineysaa xanuunka asalka u ah.
Iyada oo ay sabab u tahay cuncunka dheeraadka ah ee malabku, bakteeriyada wadnaha ee ka yimaada mareenka caloosha iyo mindhicirka ayaa si degdeg ah looga tirtirayaa. Sidoo kale, macaanku waxay saameyn fiican ku yeeshaan nidaamka dareenka, yaraynta dareenka daalka, niyadjabinta, dareenka, adkeynta iyo hagaajinta xaaladda caloosha (gaar ahaan muhiim u ah boogaha). Ka dib liiska faa'iidooyinkooda, malaha, ma jiraan su'aalo dheeraad ah sida "Malab malab ma laga cuni karaa?".
Sidee u heli kartaa oo uga badbaadin kartaa malab ka soo guurka at home
Wanaagsan, malab tayo sare leh ee malab ah, waxaa ka wanaagsan inaad ka iibsato on feeryooyinka malab, ka soo beekeepers "gacmo" ama suuqa. Waxaa lagu iibiyaa qaab jeexjeexan ah ama gabi ahaanba. Midabku wuu ka duwanaan karaa. Gaariga wuxuu ka duwan yahay caddaan illaa dahab ah oo dahabi ah, sida midabada dhirta laga soo shubay ee shinni laga soo ururiyay manka iyo nectar waxay saameysaa midabka.
Waa muhiim! Honeycombs waa inay ahaato midab isku mid ah sida malab.
Malabka Honeycomb waa in lagu kaydiyaa weel dhoobada ah ama dhalada. Honeycombs waxaa loo qaybiyaa xariijimo yaryar waxaana lagu dhejiyaa suxuunta ku habboon. Weelka waa inuu nadiif ahaadaa, oo engegaa oo daboolaa. Sidee loo kaydiyaa malabyada? Si fudud u dhig weelka leh malabyada qolka qabow iyo mugdiga, ka dibna alaabtu ma lumiso hantideeda waxtar leh muddo dheer. Ka ilaalinta malab ee malab ah xaaladaha noocaas ah, malab waxay noqon doontaa tayo sare leh dhowr sano. Ka dib hal sano oo kaydin ah, malabku wuxuu bilaabi karaa inuu soo saaro.
Waa muhiim! Ha dhigin malab heerkul ka sarreeya +30, sifooyinka wanaagsan ee lumay.
Ma suurtogal in la cuno macaan, iyo sida loo sameeyo
Sida shey kasta oo kale, malab ka soo jilicsan ayaa leh qaar ka horjeeda. Ugu horreyn, kuwani waa dareen-celin xasaasiyadeed, inkastoo ay aad u yar yihiin dadka badankoodu waxay dareemayaan saameynta wanaagsan ee isticmaalka malab.
Iyadoo ku saleysan arintan, gabagabadu waxay soo jeedinaysaa lafteeda: waxaad cuni kartaa malabka malabku, laakiin sida loo isticmaalo waa horay ganacsi. Waxaad cuni kartaa oo dhan, ama waxaad ku dari kartaa shaaha.
Ma taqaanaa? Kaliya 2% dadka ka soo jeeda dadka guud ee adduunka ayaa ku dhacda xasaasiyadaha xasaasiyadda.
Isticmaalka malab ah ee daawada dhaqameed
Honey, ee laftiisa, waa mid nafaqo leh, waxaa ku jira fiitamiin badan iyo xubno raad, laakiin malab ee malab ah marar badan faa'iido badan. Marka laga soo qaado magaca, way cadahay in ay si toos ah ujoogsato malab. Malabaha Honeycomb waxaa ka mid ah propolis, manka iyo perga, taas oo kaliya kordhinaysa sifooyinka wanaagsan ee badeecadda. In daawada dad, malab ee malab ah waxaa loo isticmaalaa inta badan. Thanks to isaga, iyo malabkii laftiisa, cudurada soo socda ayaa la daaweyn karaa:
dhibaatooyinka nidaamka dheef-shiidka;
barar dheecaan, nabarrado kala duwan iyo gubasho;
angina iyo stomatitis;
Iyadoo ku xiran nooca malab (lime, qumbaha, qajaarka, iyo wixii la mid ah), cudurrada qaarkood waa la daaweyn karaa, taas oo aan la yaabin, sababtoo ah nooc kasta oo ah shanlada malab waa mid u gaar ah.
Sida hore loo soo sheegay, kaliya laba boqolkiiba dadka ku nool dhulka ayaa leh xasaasiyad xasaasiyadeed oo joogto ah oo ku saabsan dhammaan waxyaabaha shinni ah. Haddii aadan hubin inaadan xasaasiyad ku lahayn, markaa waxa fiican inaad la tashato takhasusle. Waxaa lagu siin doonaa bioassay, natiijooyinka ay kuu sheegi doonaan haddii aad ku raaxaysan karto hadiyadaha dabiiciga ah. Laakiin, haddii aad mar hore u wada baabbi'isay malab badan iyo shinni ayaa ku qaniinay, ka dibna waxaad cuni kartaa malab ee malab aan cabsi lahayn oo aan ka cabsan caafimaadkaaga, waxaad horay u ogtahay sida loo cuno malab.